Michael Owen Oo Saadaaliyay Kulanka Finalka FA Cup Ee Maanta Ka Dhacaya Wembley Stadium | Laacib.net
Michael Owen Oo Saadaaliyay Kulanka Finalka FA Cup Ee Maanta Ka Dhacaya Wembley Stadium
May 18, 2019 Balaleti 1
Michael Owen ayaa u saadaaliyay Manchester City inay maanta oo Sabti ah qaado koobkeedii 3aad ee maxaliga ah ee xilli ciyaareedkan marka ay finalka FA Cup garoonka Wembley kula ciyaaraan kooxda Watford.
Man City ayaa laga qaaday finalkoodii ugu danbeeyay ee FA Cup ee ay la ciyaareen Wigan Athletic sannadii 2013, waxaana rajeynayaan in biriqda aysan mar labaad ku dhicin marka ay soo galaan garoonka Wembley maanta.
Michael Owen oo ka hadlayay ciyaarta finalka ee FA Cup ayaa yiri:
“Watford waxaa laga badiyay 10kii kulan ee ugu danbeysay ee ay la ciyaareen City tartamada oo dhan, Pep Guardiola ayaa isaga rikoor guulo ah ka heysta Watford, lix kulan uu ka horyimid waa uu wada badiyay.
“Waxaan guul raaxo leh u saadaalinayaa Manchester City inay ku badiso 3-1 iyadoo Raheem Sterling uu goolka furitaanka dhalinayo.”
Rigoore ayay Chelsea kaga qaadeen koobka League Cup bishii Febraayo ee sannadkan, waxaana ay isbuucii hore ku guuleysteen horyaalka Premier League markii labaad oo isku xigta.
Taasoo ka dgigeysa in City ay taariikh u sameyso kubada cagta Ingariiska, iyagoo haddii ay ku guuleystaan FA Cup nooqn doona kooxdii ugu horeysay ee Ingariis ah ee isku qaada seddexda koob ee maxaliga ah hal xilli ciyaareed.
hasan bayle says:
kolay waa ciyaar aad uxiisa badan markii la eego labada dhinacba waa kooxo awood leh lkn lagama yaabo
man city ina ay si fudud kabaha iskala duul marto waayo watford waa koox awood badan marka aan eego xiliciyaareedki dhamaaday xalkay kaga jirtay
lkn waxaan rajaynayaa
in ay isla dhaafi waayaan 1 iyo 1
lagu kala bixi doonana extra time
inta la isla gaadhin gool ku laadka
man city 1 watford 0
total 2 % 1